Ndeapi Zororo 2020 Akatidzidzisa NezveMafoni Ekushambadzira Matanho mu2021 | Martech Zone
Izvo zvinopera pasina kutaura, asi mwaka wezororo muna 2020 wanga wakasiyana nemamwe atakamboona sevakagadzira. Nezvirambidzo zvekusiyana kwenzanga zvakare kubata pasi rese, maitiro evatengi ari kuchinja kubva mutsika dzechinyakare.
Kune vashambadziri, izvi zviri kuramba zvichitibvisa pamagariro echinyakare uye ekunze-kwe-Kumba (OOH), uye zvichitungamira mukuvimba nefoni uye nedhijitari kubatanidzwa. Pamusoro pekutanga pakutanga, zvisati zvamboitika simuka mune makadhi echipo yakapihwa inotarisirwa kuwedzera mwaka wezororo kusvika muna 2021.
Vatengi havasi kungoshandisa mari yakawanda pamakadhi emakadhi (17.58%) gore rino, asi vachitenga makadhi echipo kazhinji (+ 12.33% YoY).
Kugadzira mameseji ezororo uye kukurudzira kutenga kuburikidza nharembozha uye nemadhijitari huchave hunyanzvi hunodiwa kuti vashambadzi vagamuchire kwemakore mazhinji anouya.
70% yemakadhi echipo akaregererwa mukati memwedzi mitanhatu yekutenga.
Nepo kushambadzira kwenhare kwagara kuchikanganisa, isu tinofanirwa kuziva nematambudziko ayo akasarudzika: vatengi vanotendeukira kunotenga pazvikwiriso zvidiki zvinoreva dzimba shoma dzekushambadzira. Zvakare, iko kutsamira kwekufambisa pane nharembozha kunoreva kuti kutarisisa kwakapfupika kupfuura nakare pakati pegungwa rezviziviso zvakafanana.
Izvi zvinoita kuti zvive zvakanyanyisa kukosha kuseta marashi ako, kuve nechokwadi chekutumira mameseji kuri kutumira iwo chaiwo meseji mushe, kugara zvakanaka nevanogona kutenga, uye kutyaira chiito chinotungamira kune zvaunoda mhedzisiro. Nhanho yekutanga yekuratidzira iko kubata kwevatengi kunouya kubva kune yekugadzira maitiro kumashure kweako chigadzirwa kushambadzira.
Tanga NePurogiramu yeMutambo uye Zvishandiso Zvakakodzera
Nhanho yekutanga yakakosha usati wanyora izwi rekopi kunzwisisa mbiru mbiri dzakakosha:
Ndiani waunoda kusvika?
chii chiito unoda here kuti vatore?
Usati wachera mukutumira mameseji uye mifananidzo, tanga watora nhanho kumashure uye funga nezve izvo zvauri kuyedza kuita. Uri kuedza kukwidziridza ruzivo rwechiratidzo chako? Uri kuunza chigadzirwa chitsva kumusika? Uri kuedza kutyaira kumusoro kutengesa?
Munharaunda yenhare, zvingangoitika kuti zvese izvi zvinangwa hazvigoneke, asi nehurongwa hwakakodzera hwemutambo, unogona kuvaka mushandirapamwe nekusimudza kwakasimudzira kuvaka kubatana pazvinangwa izvi. Uku kufunga kune mutsindo kunokutendera iwe kuti uteme kuburikidza neruzha uye ugadzire inochinja nguva yechiratidzo.
Iva Nesanganiswa Yakakura Yezvishandiso Sarudza Kubva
Paunenge uchinge warondedzera zvakajeka mazano uye zvinangwa, isa pfungwa dzako kuzvishandiso. Iko kune yakazara yakazara maturusi ekubatsira kuona kuti kwako kwekugadzira kuita kuri kubudirira-zvitoro zvinowana, zvakapfuma midhiya kugona, vhidhiyo, zviripo zvemagariro zvemukati, nezvimwe.
Kuti ubatanidzane nedhijitari, kusendama pamidziyo yedhijitari senge kudyidzana uye kukwirisa kuri kuwedzera kuve zvivakwa zvemakampeni akabudirira uye nekubatsira mabrands kubuda. Zvisinei neyakagadzirwa kurongedza, kubatanidzwa uye kushevedzera kwakajeka kune chiito kwakakosha kuti mameseji ekugadzira anowirirana nevatengi mune zvese zvine chinangwa uye zvine simba nzira.
Sanganisa Kadhi Yezvipo Zvemukati pazvinenge zvakakodzera
Tichifunga nezvekukurumidza kukwira kwe chipo makadhi ino yezororo, kurudzira makadhi ako ezvipo uye wedzera mazano akakodzera kukurudzira kushandiswa. Izvi zvinosanganisira zvinongedzo zvinobatsira pane ese mameseji anotendera vashandisi kuti vatarise zviyero uye vawane zvinokurudzirwa zvinoenderana nekutenga kwakapfuura kuitira kuti avo vanogamuchira kadhi rechipo vawane kurudziro zvichibva pane zvinoitwa pamwe chete nemutengi mafambiro kana zviitiko zvakasarudzika zvekutenga maitiro. .
Kubudirira Nhau Kukurudzira Isu
Pakati penguva yega yega yakaoma kune vanoshambadzira, kune vanokunda venyama; mhando dzakapaza ruzha nehurongwa hwekufunga, kuita zvekugadzira, uye hurukuro ine simba. Heano mamwe maratidziro akabatanidza chimwe nechimwe chezvinhu izvi kugadzira mazano ekukunda:
Mahombe Makuru! - Uyu mutengesi weAmerica akagadzira kambeyini iyo yaunza ruzivo rwezuva nezuva pamusoro pezvipo uye madhiri kune vatengi. Ichi chigadzirwa chekugadzira chakasanganisa inotsvedza gallery yezviratidzwa nemifananidzo pane yega furemu, iine yakasarudzika, yehupenyu chinhu chezororo chekuita nevatengi zvakanyanya. A shop ikozvino kufona kuti chiitwe (CTA) bhatani rakazotungamirwa kune iro peji rekutenga kwechigadzirwa. Uku kwaive kwakabudirira kwazvo kugadzira mukubatanidzwa kwevapfumi vezvenhau kugona uye kunakidza, quirky mifananidzo.
Josh Cellars - vakatora nzira yechinyakare kumushandirapamwe wavo wezororo, vachishandisa skrini yakazara, vhidhiyo ine simba. Mifananidzo inofadza yewaini inodururwa padyo nemoto unotutira unogadzira chishandiso chekushandisa cheichi chigadzirwa, uye inovaka kukosha kusingaonekwe kwechigadzirwa pasina kudhirowa zvisikwa kubva kumuoni. Iyo peji rekumira riri nyore uye elegant, iine yavo miviri yepamusoro vintages ine chinongedzo chekutenga waini izvozvi.
NYAYA - mutengesi wepasi rese wematurusi emagetsi uye mabhatiri akashandisa mushandirapamwe wezita rezororo umo kuvhenekwa kwemifananidzo kwakatenderedzwa padura remapakeji avo mune yavo tema-color uye maturusi emagetsi. Kudzvanya iyo CTA yakatungamira vatengi kune chinotsvedza chiitiko, nemazororo emagetsi akasungirirwa pamusoro, kwaunogona kutenga kuburikidza nhatu dzakasiyana madhiri. Kuenderera mberi nekubatana kwakaita kuti vataridzi vaone peji yezvigadzirwa uye nzvimbo yechitoro kuti vawane mutengesi wepedyo anotengesa zvigadzirwa zvavo. Mushandirapamwe uyu wakaita basa rakakura rekubatanidza hupfumi midhiya mhenyu uye kudyidzana kugadzira chinhu chinobata chinotungamira chigadzirwa / dhizaini yekuziva, pamwe nechishandiso chikuru chekutsvaga mutengesi ari padyo.
Kubudirira zororo iri nekupfuura zvinoda kuti makambani akoshese mushandirapamwe wakasarudzika wakasarudzika unodhonza mutengi kuburikidza nekudyidzana, kutumira mameseji ane chinangwa, uye kugonesa. Uye kunyangwe ichi chingave chakasiyana, hezvino zvekushandisa zvakanyanya mwaka uno wezororo. Gara wakachengeteka!
Tags: mijenya mikurumutengi maitirokudana kuzviitogamificationchipo kadhi kudzikinurakadhi rechipo kushandisachipo makadhizororo zvekutenga maitirokusanganajosh cellarsmobile advertisingOOHkunze kwemushakunze kwekushambadzira kwemushastihlkushambadzira kwechinyakare
Joseph Intile ndiye Anogadzira Director kuInMarket uye ane makore gumi nemana ekuberekwa achishanda seese ari-mumba uye akazvimiririra dhizaini, anoshanda mukumaka, kudhinda uye nharembozha yakavakirwa dhizaini.
KWI: Yakabatana CRM, POS, Ecommerce uye Merchandising yeVakakosha Vatengesi